Rudzi: Runako uye Utano
Chii chinonzi thrombosis, uye maitiro ekugadzirisa nayo? Mukana we thrombosis mutsinga, kuwanda kweropa kunoonekwa, kuwanda kweropa, uko kunosanganisira erythrocyte, leukocyte, maplatelet uye fibrin, inosangana neyemukati memukati memudziyo uye ...
Chii chinonzi ectopic nhumbu? Matopu ndiwo mutezo unofambiswa nezai rakauchikwa kubva pakutanga kwechubhu kupinda muchibereko. mukadzi ane hutano ane nhumbu. iro zamu rinopfuura nzira kwemazuva gumi uye ...
Nei zvinodhaka zvine pseudoephedrine zvichirambidzwa muRussia? Izvi hazvikonzere kupindwa muropa, asi nekuti mishonga yakadai inokanganisa kusarongeka kwemoyo, kuwedzerwa kwemoyo, uye pamwe nekurohwa. Masayendisiti eItaly anotsanangura nyaya ...
nzira yekurapa migraines kana kubvisa marwadzo nekukurumidza? Massage yepashure yechibereko yemhasuru (pakati penzeve nepazasi), zora musoro wako ne "jaya", inwa inopisa tii uye unamatira mugiya unodziya cheki, asi kazhinji zviri nani ...
Ndokumbira unditaurire kuti ndeapi mazita emafuta ekuzora akavakirwa nehuturu hwenyuchi? APIZAPTPOH (APISARTHRON) Dosage form: Mafuta ekushandisa kwekunze. Kuumbwa: 100 g yemafuta ekushandisa kwekunze ine: Yakarongedzwa uturu hwenyuchi - Zmg Methyl salicylate ...
Nei tsvina ichinhuwirira zvakashata?! Uye kana iwe ukarasa marara, iwo zvakare anonhuwirira zvakashata mushure memazuva akati wandei! Kungofanana nemarara ese aunodya anounganidza mukati medumbu. "Its rude ...
Ndeipi tsananguro yekupindwa muropa nezvinodhaka? 10b Kupindwa muropa nezvinodhaka Zvakasimba, zvinokwezva zvinokwezva kumishonga yezvinodhaka, kuburutsa muviri nepfungwa, hunhu hunodhakisa nekuomesa hurongwa hwepakati, hunogadzira nyika ...
Zuva reWorld Health riri rini? Kubvumbi 7 World Health Day inopembererwa pazuva rekusikwa kweWorld Health Organisation WHO muna 1948. Kubva ipapo, nhengo dzeWorld Health Organisation ...
Mikoko inokonzerwa nei? Kutyora microflora ... seimwe yezvakakonzera, Yandex inobatsira mune ese esli eto y vas to le4ites y allergologa chisimbwa kune chimwe chinhu ... Chete kuona pane ...
Nei mhete yesirivheri yakasviba paruoko rwako? nekuti sirivheri. sezvandakanzwa! Ungave uine chimwe chinhu mukati, ndiko kuti, dzimwe nhengo dzinorwadza, kana kuti vane tsiye. Yakachena neammonia. Ndakave ne…
Chii chinonzi physiotherapy? etol nzira dzakasiyana dze physiotherapeutic, semuenzaniso, electropharesis Physiotherapy (kubva muchiGiriki ph # 253; sis - zvisikwa uye kurapwa), bazi remushonga rinoongorora kurapa kwezvinhu zvemuviri uye nekuvandudza nzira dzekushandisa kwavo pakurapa uye kudzivirira zvinangwa ...
Seborrhea, chirwere chii? Kutapukira nyore nyore ??? Kuti uzviise zvakapusa, seborrhea chakuvhe chinokonzeresa kudzimba. Fungus chirwere chinotapukira, zvinokwanisika kuibata mumugadziri wevhudzi, kana isina kugadziriswa ...
ndeapi mishonga inorwisa mabhakitiriya anorapwa nayo? chenjera, izvozvi, pano purofesa achakukurudzira kuti furaya howa kana, semuenzaniso, tora $ 100 uye undiudze kukhemisi ndipe tramadol yezvose uye ...
Lingonberry inokwidza kana kudzikisa BP? Iko kumanikidzwa kunodzikiswa nechokeberry. Lingonberry haisi yemishonga inodzvinyirira. Ona iyo Federal Rejista yeMishonga :) iyo yakajeka diuretic, zvinoreva kuti inoderera zvishoma .. Inowanzoita BP, kana ...
chii chinonzi vagotonia? Wadiwa Zara! Muhurongwa hwekutyaira hwemuviri wemunhu, pamusoro peiyo yepakati neyepamusoro, kune zvakare kunonzi kuzvitonga kwehurongwa hwehutongi, iyo inomiririrwa nemhando mbiri: parasympathetic ...
Ndeupi wakanyanya kukwirira chitsitsinho? iyo yakakunakira iwe. kuita kuti zvive nyore uye kugadzikana kufamba. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaverenga kumwe kunhu kwekuti 11 cm chitsitsinho chinobatsira kuve nejasm, nekuti kana uchifamba ...
Laryngitis inorapwa sei? uye inopararira here? Kwete kutapurirana, asi zvirinani nemajekiseni. Iwe haugone kuchirapa nemapiritsi. Zvirinani ingobvunza jekiseni. Laryngitis iko kuzvimba kweye larynx uye tambo dzezwi, dzinoratidzwa nekutaura kusheedzera, ...
Chii chinonzi flat-valgus flat tsoka mumwana? imwe yemhando dzetsoka dzakatsetseka. kurapwa - kudya kwakaringana, kurovedza muviri, shangu dzakakodzera, nguva nenguva kana kugara uchigadzirisa jimunasitikisi, kukwiza nguva nenguva uye kushanya kwachiremba kune varapi ...
Zvinodhura zvakadii kuwedzera bvudzi? asi kwete vhudzi rese, asi mabhudhi chete, 1 bundle rebvudzi rinodhura kumwe kunhu kubva pa120 rubles kana avhareji yemamirioni zana kusvika mazana maviri akashandiswa pane iyo boschka yese (kupfuura ...
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,972 masekondi.